LibreOffice 6.4.4 ikozvino yavapo, hapana nhau dzinozivikanwa | Linux Vakapindwa muropa
LibreOffice 6.4.4 ikozvino yavapo, isina nhau dzinozivikanwa asi ichivandudza kugadzikana uye kuvimbika
Mavhiki mashanu mushure previous version uye ichienderera mberi nehurongwa hwayo, Iyo Gwaro Sisekelo yaparura imwe poindi yekuvandudza hofisi yayo suite Ndezve LibreOffice 6.4.4, yechina yekugadzirisa inogadziridza mune ino nhevedzano inoenderera nekugadzirisa mabugs kuti ive iyo vhezheni inokurudzirwa neprojekti yezvikwata zvekugadzira.Uye isu tinorangarira kuti pane zvingangoita zvingasarudzwa zviviri zviripo uye, parizvino, iyo yakakurudzirwa zvikwata zvine basa rakakosha zvakadaro v6.3.6 yakaburitswa zuva rekutanga remwedzi uno.
MaharaOffice 6.4.x ichiri kurapwa senge vhezheni yatinoda iyo yese nhau. Iyo Gwaro Foundation haikurudziri nhevedzano nyowani kudzamara yawana kanokwana zvishanu zvekugadziriswa, izvo zvinoreva kuti zvichave kana chikamu chinotevera chaburitswa apo vanokurudzira nhevedzano 5 yeavo vedu vanoita basa rakakosha uye vanoda kushanda zvakakwana kuchengeteka. Uye, kunyangwe iyo yepamusoro-to-date sarudzo inosanganisira yakawanda nhau, zvakare inosanganisira akawanda mabugs nekuti haanyatso kuratidza.
LibreOffice 6.4.5 iri kuuya mumavhiki mashanu
LibreOffice 6.4.4 ikozvino iripo kubva kune yepamutemo webhusaiti yeiyo purojekiti, iyo yatinogona kuwana kubva Iyi link. Vashandisi veLinux vanowanikwa muDEB, RPM kana mapakeji ebhinari. Mumaawa mashoma anotevera ivo vanowedzera iyo nyowani vhezheni yacho Flathub (Flatpak) yatove Snapcraft (Snap). Ivo vedu vanoshandisa iyo vhezheni yepamutemo marekodhi ekuparadzira vachatofanira kumirira mazuva mashoma kuti iyo dudziro ioneke.
Kune rimwe divi, Iyo Gwaro Foundation iri kutoshanda LibreOffice 7, chinova chiitiko chakakosha kwazvo chinozounza maficha matsva senge yakagadziriswa faira rutsigiro kana kubviswa kwakazara kweFlash mune yese seti yekushandisa. Vashandisi vanofarira vanogona kuisa pre-kuburitsa vhezheni yeLibreOffice 7 kubva mupakeji yatovepo pa Iyi link. Iyo yekupedzisira uye yakagadzikana vhezheni ichauya yatove muna Nyamavhuvhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » LibreOffice 6.4.4 ikozvino yavapo, isina nhau dzinozivikanwa asi ichivandudza kugadzikana uye kuvimbika
Audacity 2.4.1, iyo yazvino huru kuburitswa yadzokera muchitoro uye ikozvino isina yakakomba glitches